Football Khabar » कोपा अमेरिका खेल्ने ब्राजिलको टोली घोषणा : को–को परे ?
कोपा अमेरिका खेल्ने ब्राजिलको टोली घोषणा : को–को परे ?
एजेन्सी, जेठ ३
अर्को महिनाबाट सुरु हुने दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो फुटबल प्रतियोगिता कोपा अमेरिका खेल्ने ब्राजिलको टोली घोषणा गरिएको छ ।
प्रमुख प्रशिक्षक टिटेले आज २३ सदस्यीय टोली घोषणा गरेका हुन् । सार्वजनिक टोलीमा केही युवा खेलाडीले स्थान बनाउँदा केही अनुभवी र स्टार खेलाडी भने टोलीमा परेका छैनन् ।
टोलीका स्थायी कप्तान नेइमारसहित अधिकांश स्टार खेलाडी टोलीमा परेका छन् । गोलकिपर एलिसन र इडर्सन टोलीमा पर्दा फिलिप लुइज, थियागो सिल्भा, एलेक्स सान्ड्रो कासेमिरो, अर्थुर मेलो, रोवर्ट फर्मिन्हो र ग्याब्रिएल जेसस टोलीमा पर्दा युवा खेलाडी डेभिड नरेश, रिचार्लिसनसमेत टोलीमा परेका छन् ।
तर, यसपटक टोलीका भरपर्दा लेफ्ट ब्याक मार्सेलो र मिडफिल्डर फाविन्होलाई टोलमिा राखिएको छैन । त्यसैगरी, अपेक्षा गरिएका युवा फरवार्ड भिनिसियस जुनियरलाई पनि टोलीमा राखिएको छैन । मार्सेलो र भिनिसियस दुवै रियल मड्रिबबाट खेल्छन् भने फाविन्हो इंग्लिस टिम लिभरपुलबाट खेल्छन् ।
त्यसैगरी, इंग्लिस टिम टोटनह्यामबाट खेल्ने लुकास मोउरा र इटालियन युभेन्टसबाटै खेल्ने डग्लस कोस्टा पनि टोलीमा परेका छैनन् ।
कोपा अमेरिका जुन १४ बाट ब्राजिलका विभिन्न सहरमा हुँदैछन् । प्रतियोगिता जुन १४ देखि जुलाई ७ सम्म चल्नेछ ।
प्रतियोगिता आयोजक ब्राजिल समूह ‘ए’मा परेको छ । सो समूहमा बोलिभिया, पेरु र भेनेज्वेला परेका छन् । ब्राजिललाई यसपटक सबैभन्दा बलियो उपाधि दाबेदार टोली मानिएको छ ।
प्रकाशित मिति ३ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १७:०८